राजनीतिक संस्कारको खडेरी, अमर्यादित बन्दै चुनावी प्रचार – Karnalisandesh
राजनीतिक संस्कारको खडेरी, अमर्यादित बन्दै चुनावी प्रचार
प्रकाशित मितिः २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १९:३४ November 15, 2019
काठमाडौँ। आगामी मंसिर १४ गते मुलकमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलले भाग लिँदैछन्। खासगरी २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालका राजनीतिक दलहरू असहिषुण बन्दै गएको पाइन्छ।
एक अर्कोको विरूद्धमा जे सुकै गर्न तयार हुने नेपाली राजनीतिक दलहरूले आजका दिनसम्म पनि त्यो अराजनीतिक चरिलाई बद्ल्न सेकेका छैनन्। ०६४ साल, २०७० र ०७४ सालका निर्वाचनहरूमा एक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अर्को पार्टीका उम्मेदवारको हत्या गर्नेसम्मका घटनाहरू भएका थिए।
त्यसका बाबजुत पनि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपाका नेता राम कार्कीले झापामा २०७४ सालको चुनावमा नयाँ सन्देश प्रवाह गरेका थिए। त्यस्तै कालिकोटमा नेपाल तरूण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले विजयी उम्मेद्वारको विजय जुलुसमा भाग लिएर राजनीतिक चरित्र देखाएका थिए।
उल्लेखित घटना बाहेक प्रतिष्पर्धिको खरो विरोध गर्ने र सक्दो खेदो खन्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको रिती जस्तै छ। उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारले पनि यहि कुरालाई थप पुष्टि गर्छ।
तितो, व्यङ्ग्यत्मक शैलिबाट प्रतिष्पर्धिको विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ। आफ्नो पक्षका बारेमा प्रसँशा र चर्चा गर्नको लागि परस्पर मित्रलाई परस्पर विरोधी खडा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिक संस्कारको कम्जोरीका कारण यस्ता आलोचना र दृश्यहरू देख्न परेको हो। सत्तारूढ दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले तल्लो स्तरको प्रचार गरिरहेका छन्। स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द बन्दै गएको नेपाली समाजले लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाउने काम गरिरहेको छ।
संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलासँगको यौनजन्य काण्डमा पक्राउ परेर जेलमा रहेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र आजमात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका मो. अफ्ताव आलमलाई व्यङ्ग्य गर्दै आफ्नो पार्टीलाई भोट मागेको देखिन्छ। नेकपा समर्थकले ‘सरर पानी घट्टमा, रूखमा भोट नहाल्नु कसैले, जिउँदै पोल्छन् एट्टाभट्टामा’ लेखेर कांग्रेसलाई बहिष्कार गर्न अनुरोध गरेका छन्।
त्यस्तै जवाफमा कांग्रेसी समर्थकले लेखेका छन्, सरर पानी घट्टमा, सुर्यमा भोट नहाल्नु कसैले, दारू खाँदै बलत्कार गर्छन्, त्यसको सट्टामा।’ यसरी चुनाव दोहोरी चलेको छ। धेरै मानिसहरूले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई अराजनीतिक र अमर्यादित कदम भनेका छन्।
यस विषयका सन्दर्भमा एकजना राजनीतिज्ञ भन्छन्, ‘घटना र पात्र सत्य होलान्। तर, अर्कालाई पछार्ने नाममा फरक व्यक्तिलाई जोडेर सिँगो पार्टीलाई चोपल्नु कत्तिको जायज हुन्छ? हामीमा राजनीतिक अध्ययन र राजनीतिक संस्कारको कमी छ। राम्रो काम गर्नेलाई चुनावमा जनताले यसै मत दिन्छन्। यसरी तथानाम गालि गर्नुको त के कुरा, उपयुक्त उम्मेदारको लागि भोटसमेत माग्नु पर्दैन।’